IMadagascar, isiqhingi esihle empumalanga yezwekazi lase-Afrika | Ukuhamba kwe-Absolut
Luis Martinez | | abanye
IMadagascar isiqhingi esikhulu esise- Indian Ocean nasogwini oluseningizimu-mpumalanga ye Afrika. Ngokuqala kwamakholoni asePutukezi futhi kamuva kwaba yiFrance, yathola ukuzimela kwayo ngo-1960. Uma sicabanga ngakho, sicabanga isiqhingi esigcwele isimo esijabulisayo amahlathi e-baobab futhi kugcwele abanobungane ama-lemurs.
Futhi inakho konke lokhu, kepha iMadagascar ihlupheke kakhulu ngokugawulwa kwamahlathi emashumini eminyaka amuva nje. Kodwa-ke, okunye kokuheha kwayo okuhle kuyaqhubeka nokuba yi amapaki wemvelo ehlanganisa cishe lonke izwe futhi inezindawo ezingakaze zisebenze ezingafinyelela kuphela ngesiqondisi esisemthethweni. Precious amabhishi futhi kunomsindo imizi qedela okunikezwayo kweMadagascar. Uma ufuna ukuyazi, sikumema ukuthi uqhubeke nokufunda.
1 Yini ongayibona eMadagascar
1.1 Isiqiwi sika-Anja
1.2 I-Tsingy de Bemaraha National Park
1.3 Isalo National Park, esinye isimanga ukubona eMadagascar
1.4 I-Andasibé-Mantadia National Park
1.5 Amanye amapaki kazwelonke azobona eMadagascar
1.6 Iziqhingi zaseMadagascar
1.7 I-Antananarivo, inhlokodolobha yaseMadagascar
2 Yisiphi isikhathi esihle kakhulu sokuvakashela iMadagascar
3 Ongakudla eMadagascar
4 Ungafika kanjani eMadagascar
Yini ongayibona eMadagascar
Mncane kancane kuneSpain, umehluko phakathi kobuhle bengaphakathi lawo namabhishi amahle asogwini lwayo kungenye yezimpawu zeMadagascar. Sizoqala ngokuxoxa nawe ngamapaki awo kazwelonke bese sikhuluma ngamadolobha awo.
Cishe ngamahektha amane, le ndawo ebekiwe ingumphumela wesinyathelo sabantu bendawo baseMalagasy, abaphethe ukuyiphatha esimeme. Bakwenze kakhulu ukusindisa inani lama-lemur. Eqinisweni, uma ufuna ukubona lezi zilwane, enye ye- izimpawu zezweIndawo ka-Anja iyindawo engcono kakhulu, njengoba cishe kungamakhulu amane.
I-Tsingy de Bemaraha National Park
Kutholakala ku- Isifunda saseMelaki kusuka eMadagascar, kuyinto Amagugu Emhlaba. I tsingys Yizindawo eziphakeme zekarst lapho kunemihume eminingi kanye nezikhala ezifakwe amanzi angaphansi komhlaba.
Ngakho-ke, ukuvakasha kwakho kuleli paki kuzokuvumela ukuthi ubone ukwakheka kwamadwala, imihosha namachibi ahlukile emhlabeni. Ungadlula kukho kube okukodwa nge-ferrata Kodwa-ke, iveza ubunzima obuthile njengoba inezingxenye eziqondile nezime mpo, kanye namapulatifomu alenga.
I-Tsingy de Bemahara Natural Park
Ungathatha futhi uhambo lwe- UMfula iTsiribihina ezikebheni zendabuko ezihlukile. Ungayiqasha enhlokodolobha yezwe, i-Antananarivo, kodwa futhi nasedolobheni lase I-Miandrivazo, lapho luqala khona uhambo.
Isalo National Park, esinye isimanga ukubona eMadagascar
Uma uvakashele i- IGrand Canyon yaseColorado, ungathola umbono wokuthi uzotholani kule paki. Kodwa-ke, ungalindeli ukuthi umbala obomvu noma ukungabi nalutho oluhlaza kuwo. Ngakolunye uhlangothi, uzothola imihosha emikhulu enezinhlobo zezitshalo ezikhona kuphela, kanti-ke nama-lemurs.
Ngeke ukwazi (futhi asikweluleki) ukuyivakashela wedwa. Kuzofanele uqashe i- Umqondisi wendawo edolobheni eliseduze le URanohira. Futhi ukuthi ukuvakasha kwepaki kungahlala kusuka emahoreni ambalwa kuye ezinsukwini ezimbalwa.
I-Andasibé-Mantadia National Park
Itholakala eduze kakhulu ne-Antananarivo ngakho-ke ivakashelwa njalo ngabantu baseMadagascar. Inamahektha acishe abe yizinkulungwane eziyishumi nanhlanu ihlathi elinomswakama nangokunotha okukhulu kwezimbali. Kepha okukhanga kakhulu ukuthi lapho ungabona izinhlobo ezinkulu kakhulu ze-lemur: lokho okuthiwa indri-indri, ongafinyelela kumasentimitha angamashumi ayisikhombisa ukuphakama namakhilogremu ayishumi ngesisindo.
Amanye amapaki kazwelonke azobona eMadagascar
Ukuze singazandisi kakhulu emapaki futhi sikunikeze imininingwane ethe xaxa ngokuvakasha kwakho eMadagascar, sizofingqa ezinye izikhala zemvelo ongazibona esiqhingini. Isibonelo, yena I-Andringitra National Park, nezintaba zalo ezinamadwala zilungele ukuqwala, futhi lowo oneRanomafana, okuwukuphela kwaso lapho i- Uqalo lwegolide, olunye uhlobo lwe-lemur.
I-Andrigitra National Park
Njengoba wazi, izwe lase-Afrika liyisiqhingi esikhulu, kepha futhi linezincane ezimbalwa okufanele uzivakashele. Kuyindaba ye- USakatia, UMitsio o Tanikely, kepha okubili okubaluleke kakhulu nokuvakasha nguNosy Be noSainte Marie.
Nosy Be Kuyisiqhingi esinemigodi eminingi yentaba-mlilo lapho kwakhe khona amachibi amahle. Iningi lalo lihlala ILokobe Nature Reserve lapho kuhlala khona izinhlobo zamankentshane kanye nelinye lamaxoxo amancane emhlabeni: IStumpffia Pigmaea. Kepha ngaphezu kwakho konke, lesi siqhingi singesinye sezivakashi ezibaluleke kakhulu eMadagascar amabhishi amahle kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, USainte Marie futhi inezindawo ezinhle ezinesihlabathi nemizila yokuhamba izintaba. Kepha okunye okuhehayo kusedolobheni elibaluleke kakhulu, I-Ambodifotatra: yi Isonto laseSanta Maria, eyokuqala ukwakhiwa eMadagascar njengoba isukela ngo-1857.
I-Antananarivo, inhlokodolobha yaseMadagascar
Ngemuva kohambo lwethu lokudabula izimangaliso zemvelo zaseMadagascar, manje sesizokwazi amadolobha alo amakhulu. I-Antananarivo iyinhloko-dolobha futhi itholakala maphakathi nezwe. Ukuyivakashela, sincoma ukuthi uhambe nomhlahlandlela ngoba unezindawo eziyingozi.
Kuyo ungabona ifayela le- indlovukazi rova ​​esigodlweni, okuyinto yokwakha kabusha. Elidala laliyingxenye yesethi eyashisa ngo-1995. Kodwa kuyafaneleka ukuthi uyigqoke ukuze wazi umlando we Umbuso we-Imerina Noma, beka enye indlela, kusuka eMadagascar yangaphambi kwekoloniyali.
Ungabona futhi i- Isigodlo sase-Andafiavaratra, ukwakhiwa kwezimbali okwenziwe namuhla Umnyuziyamu wezomlando. Zombili lezi zakhiwo zisengxenyeni endala ye-Antananarivo, lapho kunezinye izindlu ezingajwayelekile.
Ngokwengxenye yayo, i I-Independence Avenue Umgwaqo omkhulu wedolobha futhi uzobona kuwo amaningi izindlu zesitayela samakoloni. Iqala ngobuhle Isiteshi sesitimela saseSoroano futhi ungabona kuyo Isigodlo sikaMongameli.
Okujwayelekile kakhulu yi- Imakethe ye-Anakely, lapho ungagcwalisa khona impilo yansuku zonke yezakhamizi zendawo futhi uthole zonke izinhlobo zemikhiqizo, kusuka ekudleni kuya kwezobuciko. Ekugcineni, ungavakashela e-Antananarivo the ICathhedral, eyakhiwa ngo-1873 kanye ne- Ichibi le-Anasoy, okufakelwayo futhi kulesiqhingana esikhulukazi uzobona itshe lesikhumbuzo lalabo abafela empini. Leli chibi lisendaweni engaphephile ikakhulukazi, ngakho-ke kufanele ube nalo ukunakekelwa.
Shayela UDiego Suarez Kuze kube kungekudala, leli dolobha elisenyakatho enkulu yezwe lalingelinye lamachweba alo amakhulu. Leli elikuleli dolobha lisendaweni ethe xaxa lapho kuvela khona okuthile Isinkwa Esinoshukela, isiqhingi esibizwa ngokufana kwaso nentaba ye I-Rio de Janeiro. Kepha, ngaphezu kwakho konke, i-Antsiranana ivelela ubuzwe bayo nobuzwe bayo obubabazekayo be izakhiwo zamakholoni zaseFrance.
Njengoba inabantu abangaba yizinkulungwane ezingamakhulu amabili, iyichweba eliyinhloko lezwe. Wakhula ngesikhathi sokubusa kuka URadama IMaphakathi nekhulu leshumi nesishiyagalolunye leminyaka, umlingiswa onengekayo owayesebenzisa leli dolobha njengendawo yokuhamba yezigqila ayethengisa nazo. Ngaphandle kwezimakethe zayo zemigwaqo ezinabantu abaningi, njengaleyo e IBazary Be, ayinakho okuningi ongakunikeza khona. Ngoba amabhishi alo mahle kodwa amaningi awo ukubhukuda akuvunyelwe ngenxa yokungcola kanye noshaka.
Esikhundleni salokho, sikweluleka ngokuqinile ukuthi uvakashele leli dolobha elincane. Lapho uma uzothola Amabhishi amahle kuphi ukugeza nokwenza imidlalo efana ne-kayaking. Kepha, ngaphezu kwakho konke, ngoba yindawo lapho ungabona khona ukubabazeka Umgwaqo weBaobabs. Kuyindlela ende ehanjiswe yizihlahla eziningi zalolu hlobo, inelukuluku lokufuna ukwakheka nokuphakama kwayo.
Naka kakhulu ifayela le- ummbila othandweni, izibonelo ezimbili ezikhule zibambene. Kungaba kanjani ngenye indlela, banobuhle umlando wendawo. Lokhu kusho ukuthi benza abantu abasha ababili abavela ezigodini ezahlukahlukene ababethandana futhi bacela onkulunkulu babo ukuba babe ndawonye njalo.
Yisiphi isikhathi esihle kakhulu sokuvakashela iMadagascar
Yize izwe lase-Afrika linezimo zezulu ezahlukahlukene ngenxa yobukhulu balo, ngokuvamile, izinyanga ezibandayo kakhulu ngoJulayi nango-Agasti, kanti ezishisayo ngoJanuwari, uFebhuwari noMashi. Khumbula ukuthi ukuma kwayo ngokwendawo kusho ukuthi iziteshi zayo zisatshalaliswa ngendlela ephambene kunaseSpain.
Kodwa-ke, izinyanga ezifudumele zihambisana nenkathi yemvula nesiphepho, ngakho-ke awunantshisekelo yokuhamba ngalezo zinsuku. Iseluleko sethu ukuthi uvakashele eMadagascar phakathi kukaMeyi no-Okthoba. Amazinga okushisa, yize kuyisikhathi sasebusika, mancane futhi amnandi ngemvula encane kakhulu.
I-gastronomy yesiqhingi sase-Afrika inesithako esiyisisekelo: irayisi. Kangangokuthi ivela kukho konke ukudla kosuku, kufaka phakathi ibhulakufesi. Ngokufanayo, kuhlanganiswe cishe nayo yonke into: imifino, inyama, inhlanzi kanye nezithelo ezinjengekakhukhunathi.
Impela isidlo esijwayelekile par ubuhle beMalagasy yi irayisi ne-zebu. Le bovid futhi iyinyama eyinhloko eMadagascar, yize inkukhu eningi idliwa nayo. Eqinisweni, uma bekunikeza akoho s futhi voanio Kuyilayisi elinenkukhu nokhukhunathi. Kubuye kube yinto ejwayelekile ezindaweni ezingasogwini i inhlanzi kusoso lukakhukhunathi. Ngakolunye uhlangothi i foza s no henakisoa Inyama yengulube ethosiwe nelayisi.
Ngakolunye uhlangothi, yedwa yi-eel nengulube; i-lasopy ngumhluzi wemifino; i sesika Luhlobo lwamasoseji egazi omdabu anikezwayo, yiqiniso, ngelayisi nobhontshisi kanye ne- i-ravitoto yenziwa ngomdumbula ochotshoziwe futhi uhambisane nenyama yedube noma yengulube.
Ngokuphathelene nama-dessert, i-mofo gasy ne-mokari Luhlobo lwerayisi le-pancake kanye ne koba Yikhekhe elinofulawa welayisi, uju, amakinati nama-pistachio. Ekugcineni, uneziphuzo ezimbili ezijwayelekile. Ranon'ampago Yenziwe ngelayisi elinamathela emapanini lapho liyipheka kanye ne I-rum ehleliwe Kuyi-rum yesiqhingi, ene-vanilla noju.
Ungafika kanjani eMadagascar
Isikhumulo sezindiza esikhulu ezweni yi Antananarivo kepha futhi kungamazwe omhlaba lokho Nosy Be. Bese kuba khona ezinye izinkundla zezindiza emadolobheni ezifana Toamasina, kepha inezindiza zangaphakathi kuphela.
Uma ususeMadagascar, kufanele ukhumbule ukuthi ukuhamba akulula. Imigwaqo imbalwa futhi isesimeni esingesihle. Ngaphandle kwalokhu, ukubizwa kahle kwezokuthutha esiqhingini ngohambo olude kuyabizwa itekisi-brousse. Luhlobo lweveni noma ikhumbi okumele ulihlanganyele nabagibeli abaningi. Khumbula ukuthi imizila yinde futhi inzima ngakho-ke uzoba nesikhathi sokuhlangana nabantu abahle baseMalagasy.
Kukhona nojantshi. Okujwayelekile kakhulu yilokho okubizwa ngokuthi Isitimela saseJungle, okwenza uhambo olusuka ezinkangala luye ogwini. Uhambo lwenziwa ngohele oludala nolungakhululeki oluthatha amahora angaphezu kwayisikhombisa ohambweni lwamakhilomitha angaphansi kwamakhulu amabili. Kodwa-ke, okuhlangenwe nakho ngeke kulibaleke kokubili ukuxhumana nabantu bomdabu kanye nokwenziwa kwe- Ukubukwa okumangalisayo Yini ekuhlinzekayo.
Ekugcineni, ukungena emadolobheni amakhulu, une- ipousse pousse, afana nalawo adumile i-rickshaw kusuka eNdiya nakwamanye amazwe ase-Asia.
Sengiphetha, ukuya eMadagascar kuzoba yi- isipiliyoni esingalibaleki. Uzobona ama-landscapes amahle, amanye ahlukile emhlabeni, uzokwazi amadolobha anabantu abaningi, uzokujabulela i-gastronomy emnandi futhi uzocwilisa kwelinye isiko. Naphezu kwakho konke lokhu, sikucebisa ukuthi uthathe izinyathelo zokuphepha mayelana nokuphepha kwakho ngoba isiqhingi sase-Afrika asithule njengoba kufanele.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Madagascar
Yini okufanele uyenze eMarrakech